ငါးနှစ်အောက် ကလေးများ သေဆုံးမှုအများဆုံး ရောဂါများ
မျက်မှောက်ရေးရာသတင်းသုံးသပ်ချက် ဒီမိုကရေစီရေးရာစီးပွားရေးအမေရိကန် နိုင်ငံရေး
သုတအဖြာဖြာသိပ္ပံ နဲ့ နည်းပညာကျန်းမာရေးအမျိုးသမီးစကားပြောကြရအောင်ဘလော့ဂါ
ကဏ္ဍစုံလင်သက်ကြီးစကား၊ သူယုံကြည်ရာ တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား တိုက်ရိုက်လေလှိုင်းမြန်မာပြည်မှ ပေးစာ
တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၅း၃၀-၆း၃၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ညနေ ၆း၀၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နံနက် ၅း၃၀-၆း၃၀နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀ညနေ ၆း၀၀-၇း၀၀ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာအပတ်စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာဗွီဒီယိုသတင်း သုတအဖြာဖြာ / ကျန်းမာရေး
UNICEF ကမ္ဘာ့ကလေးများ ရန်ပုံတွေအဖွဲ့က ပိုထိရောက်တဲ့ ကုသကာကွယ်မှု့တွေ လုပ်ပေးနိုင်ရင် အဆုပ်ရောင် နဲ့ ဝမ်းလျှောတာတွေကြောင့် ငါးနှစ်အောက် ကလေးသေဆုံးနေရမှု့ကို ကြီးကြီးမားမား လျှော့ချနိုင်မယ်လို့ အစီရင်ခံစာသစ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေကလည်း ကာကွယ်ကုသနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကြောင့် ကလေးသေဆုံးနေရတာကို သန်းနဲ့ချီလျှော့ချဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။Pneumonia (ခေါ်) အဆုပ်ရောင်ရောဂါအတွက် စောစောစီးစီးသိရှိပြီး နောက်မကျဘဲ ဆေးရုံဆေးခန်းပြကာ ပဋိဇီဝဆေးနဲ့ ကုသမှု့ စခံယူနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်မှီသိနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါသလဲ။ လေကတဆင့်ကူးတဲ့ဒီရောဂါကနေ ဘယ်လိုထိရောက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါလဲ။ဝမ်းလျှောရောဂါအတွက်တော့ စစချင်းမှာ ရေနဲ့ဓာတ်ဆားဓာတ် အမြန်ပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့ အိမ်မှာပဲ ဓာတ်ဆားရည်တိုက်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါနဲ့မသက်သာရင်တော့ ဆေးရုံဆေးခန်း အမြန်ပို့ဖို့လိုပါတယ်။ အစာနဲ့ရေမသန့်တာကနေ ကူးစက်တဲ့ ဒီရောဂါကကို ထိရောက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်နိုင်ပါလဲ။ဒီအကြောင်း VOA သတင်းထောက် Vidushi Sinha သတင်းပို့ထားတာနဲ့၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံက ကလေးအထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာမျိုးမြတ်လွင် ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆွေးနွေးထားတာတွေကို ကိုဝင်းမင်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
This forum has been closed. Comments There are no comments in this forum. Be first and add one အပတ်စဉ် တီဗွီမဂ္ဂဇင်း အပတ်စဉ် တီဗွီမဂ္ဂဇင်း
download ရယူရန်Medium Quality(137.93 MB)Low Quality(97.19 MB) တပတ်အတွင်း မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းသတင်းများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ နဲ့ Hollywood ထင်ပေါ်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များအကြောင်း သက်တန့်ရောင်သတင်လွှာ ... ထိပ်တန်းသတင်းများ ဆီးရီးယားမှာ တိုက်နေကြောင်း Hezbollah ဝန်ခံ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဥရောပချန်ပီယံဖြစ် အိန္ဒိယ အပူလှိုင်း ရာချီသေဆုံး ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာခရီးစဉ် ပထမနေ့ စီးပွားရေး သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ထိုးပွဲ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက် ဆွေးနွေးပွဲအကြို မြစ်ကြီးနား လုံခြုံရေး အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ ဆွေးနွေးပွဲအကြို မြစ်ကြီးနား လုံခြုံရေး ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာခရီးစဉ် ပထမနေ့ စီးပွားရေး သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ထိုးပွဲ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက် အိန္ဒိယ အပူလှိုင်း ရာချီသေဆုံး ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဥရောပချန်ပီယံဖြစ်အများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများNo itemsအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများ အပတ်စဉ် တီဗွီမဂ္ဂဇင်းကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ VOA60 World
download ရယူရန်Medium Quality(7.39 MB)Low Quality(3.66 MB) ပေါ့ဒ်ကတ်စ်RSSအီးမေးသတင်းလွှာမိုဘိုင်းလ်